Nin tuugsada oo account-ga Bangigiisa laga helay in ka badan $10 kun oo doolar. – SBC
Nin tuugsada oo account-ga Bangigiisa laga helay in ka badan $10 kun oo doolar.
Posted by editor on Diseenbar 18, 2012 Comments
Dad tuugsada ama dawarsada ayaa dunida meel kasta oo ay joogaan waxay leeyihiin xirfado kala duwan oo ay ku maareyn karaan inay ku helaan dhaqaale ay siiyaan dadka ay tuugsanayaan, iyagoo mar mar xirfadaha tuugsigu ay yihiin kuwa xirfad ku dheehan tahay oo ay beerka kala soo baxaan dadka ay doonayaan inay shilimaad ka helaan.
Qaar badan oo ka mid ah dadka dawarsada waxay kala kulmaan kuwa ay gacanta u hoorsadaan jaa’ifo culus oo ay u sii dheer tahay bah-dil, waxaase badan dadka deeqsiyiinta ah oo wixii ALLE u dhiibay jecel inay bixiyaan wax bartood, oo aanay ka lex jeclaysan kuwa ka liita.
Hadaba nin u dhashay wadanka Srilanka ee dhaca qaarada Aasiya ayaa dhawaan xabsiga loo taxaabay ka dib markii la ogaaday in Bangi uu ku leeyahay account isla markaana ay ugu jirto lacag dhan 2 milyan oo lacagta wadankaasi ah (Srilanka Rupe taasi oo u dhiganta 15, 736 (Shan iyo toban kun todobo boqol sodon iyo lix doolar) taasi oo ay u sii dheer tahay baabuur Van ah (gawaarida alaabaha qaada) iyo waliba sadex Mootooyinka sadex lugooleyda ah oo inta badan laga Isticmaalo wadanka Hindiya iyo wadamo badan oo ka tirsan Aasiya.
Qabashada ninkan waxay ka dambeysay ka dib markii Ciidamada Booliiska ee magaalada Colombo ee caasimada Sri lanka ay dhawaan ku qaadeen olole raaf ah dadka ka tuugsada xarumaha Tareenada magaaladaasi kuwaasi oo looga caal waayey inay ka fogaadaan halkaasi, waxaana Booliisku ay qabqabteen 18 qof.
Laakiin dadkaasi la xiray oo la aaminsanaa dhamaantood inay yihiin faqiiriin tuugsada waxaa ka soo dhex baxay nin Taajir ah oo isagu aan u jeedin hantidiisa balse jecel in uu dawarsado, sida ay qortey Jariidada maalinlaha ah ee ku soo baxda afka Sinhala ee lagu magacaabo Lankadeepa.
Booliisku waxay ogaadeen in ninkaasi uu yahay hantiile Bangiga ay u taal lacagta cadadkeedu kor ku xusan yahay iyo gawaarida kale ee u shaqeysay.
Xiligii la qabanayey wuxuu siday lacag dhan 4 kun oo Rupee oo u dhiganta 31 doolar oo mudo laba saac gudahood ah oo uu kaga tuugsadey xarunta Tareemada sida ay sheegeen shaqaalaha amaanka qaabilsan ee xaruntaasi.
Taajirkan Tuugsada ayaa la sheegay in sadexda Mooto ee uu leeyahay laba ka mid ah ay ku shaqeystaan dadka kale isla markaana dhaqaale Ijaar ah ay siiyaan, waxaana Wargeyska sheekadan baahiyey uu sheegay in inkastoo ninkan uu yahay nin lixaadkiisa aanu dhameyn, hadana uu ku tago xarunta Tareenada ee Ragama baabuurkiisa isagoo halkaasi ka bilaaba shaqo maalmeedkiisa Tuugsiga.
Baaritaanka lagu sameeyey ninkan waxaa la sheegay in marka maalintii uu ku jiro dawarsiga uu u xiran yahay dhar wasaq badan, balse habeenkii marka uu ka baxo shaqada waxaa la sheegay in uu ku labisan yahay dhar nadiif ah oo qurxoon, iyo waliba xiliyada uu joogo gurigiisa.
Talaabada Booliisku ku qaadeen ololaha ka dhanka ah dadka tuugsada ayaa yimid ka dib markii cabasho soo noq noqotey ay ka timid dadka rakaabka ah ee ku safraya xaruntaasi oo sheegay in qaar ka mid ah dadka tuugsada ay Qatar ku yihiin naftooda.
Maxkamad la soo taagey dadkii la qabqabtey ee tuugsanayey ayaa lagu xukumay in mid kasta uu bixiyo lacag ganaax ah oo dhan 2 kun oo Rupee una dhiganta 15 doolar, iyadoo loo sheegay in hadii ay ku bixin waayeen ganaaxaasi ay mutaysan doonaan xarig lix bilood ah, ama inay mudo shan sano ah gali karin wax tuugsi ah.
SBC International London